बाँकी यात्रा सबै नाफा !
यात्रा तय गरिँदैन, जारी गरिन्छ । जीवनरुपी यात्रा विना तालिका र तयारी कुद्छ । यात्रा लेखिएजस्तो, देखिएजस्तो हुँदैन । स्वाधीन र मौलिक संघर्षका रुपमा रहन्छ ।
अविरल यात्रामा कुदिरहेछ जीवन । पाइतालाका रेखाहरू चट्टानका संसर्गमा कतिपटक रगताम्मे भए, खस्रा भए र अब त मेटिइसके । हातले छाम्दा पनि आफ्नो हो कि होइन भन्ने भेउ पाउन सकिएका छैनन् ।
तिनै पाइताला सबैभन्दा दुःख गर्ने अंग न हुन् जीवन यात्राका । सबैभन्दा पुछारमा छ पाइताला । पुछारमा हुनुको अर्थ आधार हुनु हो, शुरू हुनु पनि हो । पुछारमा हुनुको अर्थ कर्मशील हुनु पनि हो । पाइताला छन् र पो जीवन छ । पाइतालाले यात्रा मार्ग तय गरेको हो । संघर्षका पाइला अघि बढाउँछ, हिउ, मरुभूमि, जंगल, पहरा, समथर जहाँ होस्, अघि बढ्नुको नाम पाइताला हो । पाइताला अघि बढेर न जीवन गतिवान भएको हो । उसका चोट, भोगेका पीडा मस्तिस्कसम्म नपुगेको होइनन्, तर पनि हिँड्नु, जीवनलाई गति दिनुको विकल्प छैन । उसका एकएक पाइलाले नै लक्ष्यको सगरमाथा चुमाउने, शिखर पुर्‍याउने हो ।
यात्रा संघर्ष हो । सुखका यात्राहरू भविष्यका लागि इतिहास बनेका छैनन् । संघर्षमय अविराम यात्रा आउँदा दिन, आउँदा पुस्ता अनि सबै जातिप्रजातिका ऊर्जा हुन् । उत्साह हुन् । संघर्षको यात्रा मौलिक हुन्छ । मौलिक हुनु संघर्षको विशेषता हो । कसैको जस्तो हिँडाइ यात्रा होइन । कसैको जस्तो सिकाइ यात्रा होइन । अरुको जस्तो भोगाइ पनि यात्रा होइन ।
आफ्नै शैलीको यात्रामा मानिस अविराम दौडिहेको छ । बाधा, विरोध र अवरोध पन्छ्याउँदै दौडिरहेको छ । अघि बढ्नुको अर्को नाम यात्रा हो । यात्रा टुंगिँदैन, जीवन्त हुन्छ । जीवन टुंग्यो त यात्रा टुंगिन्छ । अझ भनौ, यात्रा टुंगिएपछि जीवन टुंगिन्छ ।
पाइतालाहरूले दर्शनढुंगाका चुच्चे धारसँग मितेरी लगाइसके । अब नाङ्गा पाइतालाहरू दुख्दैनन् । रोशी खोलाको वर्षे भेलले कति लडायो, रातमाटे र धारेको ठाडे उकालोले जेठ–असारको गर्मीमा कति पोल्यो । निधारबाट पसिनाका तप्केनी कति तप्के । खाली पेटमा कुन उत्साहले भञ्ज्याङ चौतारीमा पिपलका पात बजाउँदै आएको हावामा एकपटक खुइए । स्वर्गीय आनन्द लिँदै अविराम पाइला पहाड उक्लिन्छ, उक्लिँदै जान्छ । नथाक्नु उसको कर्म हो ।
संघर्ष भएकाले यात्रामा साथ भएन । अक्सर यात्रामा साथी नहुनु सत्य हो । यात्रामा कसैलाई दिन केही हुँदैन, त्यसैले साथ हुने कुरा भएन । छिमेकी, सम्बन्धी, साथी कोही भएनन् । सफलता प्राप्तिपछि न साथ हुने हो । मनको एक कुनामा फगत आमाका आशिर्वाद यात्राका ऊर्जा थिए । न यात्राको गन्तव्य थियो, न यात्रा रोकिएको नै थियो ।
यात्रा रमाइलो थिएन, संघर्ष रमाइलो हुने कुरै भएन तर आत्मिक रुपमा गौरवपूर्ण थियो । उत्सर्ग थियो, उत्साह थियो, दुःखीसुखको अनुभूति थियो, जसले यात्रालाई अनन्त ऊर्जा दिइरह्यो । जसले लरखरिएका पाइला, थरर्र कापेका पिँडुला, थाकेको मन र थङ्थलिएको शरीरलाई रोशी, रुम्टी, रातमाटे, भञ्ज्याङ, भूमेडाडा, कानपुर, फूलपातीभञ्ज्याङ, देवीथान हुँदै सपनाको सागरमाथा ज्ञानेश्वरसम्म अविराम तान्दै ल्यायो ।
प्रत्येक पल, प्रत्येक पाइला कति जोखिमपूर्ण र खतरनाक थिए ! (मोन्टाज पल्टाउँदा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ) । तैपनि यात्राको धिपधिपे निभेन, र यात्रा अघि बढिरह्यो । लाग्छ धेरैपटक पहिल्यै जीवन गुमिसकेको हुनुपर्ने । कति जोखिम र कहालीलाग्दो यात्रा । पातलको बाटोमा चितुवाले चिथोरेको भएपनि सकिन्थ्यो, रोशीले बगाएको भएपनि सकिन्थ्यो, रुखको टुप्पाबाट लडेको भएपनि सकिन्थ्यो, भीरबाट ढुन्मुनिएको भएपनि सकिन्थ्यो, द्वन्द्वकारीले नछाडेको भएपनि सकिन्थ्यो, अरु धेरै जोखिम र विपद्बाट सकिन्थ्यो । लाग्छ बाँकी जीवन, बाँकी यात्रा सबै नाफाको हो । यसले भावी यात्रालाई झनै उर्जा दिएको छ ।
जीवन यात्रा कुनै सरल रेखा रहेनछ । प्रत्येक मोड र घुम्तीमा यात्राका अव्यक्त गन्तव्य बदलिएर जिगज्याग बने । रेखाहरू जिगज्याग मात्र होइन, धुमिल र अस्पष्ट पनि देखिए । दुःखको यात्रा कुनै सूत्र र संरचनामा हिँडेन । न सूत्र र संरचना खोज्ने फुर्सद नै भेटियो । न त्यसको चेत नै थियो । यात्राका परिणाम पनि सूत्रका योगफलजस्ता भएनन् । त्यसो नहुनु नै जीवन यात्राका ऊर्जा अनि आत्मिक शक्ति थिए । गन्तव्य पहिल्यै निर्धारण हुँदो हो, यात्राको तिथिमिति तोकिएको हुँदो हो त यात्रा कति यान्त्रिक र बेस्वादिलो हुने थियो ? न जीवनले संघर्ष गथ्र्यो, न थप स्वाद नै लिन पाउथ्यो । न उत्सर्ग न संघर्ष, न जीवनको महत्त्व नै हुने थियो ।
यात्रामा सफलताको आरिस हुन्छ, इष्र्या हुन्छ । आफन्तहरू इष्र्यामा छन्, साथी संगतिहरू इष्र्यामा छन्, चिनेकाहरू अमिला मनमा छन् । प्रत्येक मनहरू ईष्र्यालु छन् । सफलतामा बधाई दिने धेरै मनहरू अमिला थिए । उन्मुक्त थिएनन्, खुम्चिएका थिए । आमा र गुरुको जस्तो निःस्वार्थ थिएनन् । खुम्चिएका अमिला मनहरू स्वयम् उनीहरूका यात्राका अवरोधक हुन् भन्ने चेतना ती मनहरूलाई हुँदो हो त समाज कति सपाट हुने थियो । ‘किन चाउरिस मरिच आफ्नै पीरले’ भने झैं अरुको सफलतामा इष्र्या गर्नेहरू चाउरिन्छन् तर असफलतामा तिनै मनहरू दयाका भीख दिनपछि पर्दैनन् । नखुलेका मनहरू यात्रालाई शुभकामना भन्न सक्दैनन् । क्षमतालाई इष्र्या र निर्धालाई घृणा गर्नु मानव मूल्य होइन । इतिहास साक्षी छ सफलतामा इष्र्या र असफलतामा हेय गर्दा मानव सभ्यता साँघुरिएको छ तर संघर्षमयी यात्री साघुरा मन र देखावटी शुभकामनाको पर्वाह गर्दैन । फगत उ यात्री हो । नोजी हुनु, अरुजस्तो बन्नु उसलाई फुर्सद पनि छैन । अविराम उ हिँडिरहन्छ । अनन्त क्षितिज हेरेर, फराकिलो आकाश हेरेर । यात्रा यसरी नै फराकिनुपर्छ । सकेजति फराकिनु यात्राको बैशिष्ठ्य हो ।
स्वेर कल्पनाको स्वाद पिएर यात्रा अघि बढ्दैन । कोठामा एक्लै रमाउने, स्वच्छन्दतामा वयेलिने मनचित्र पनि यात्रा होइन । यात्रा अनन्त साहसले हुन्छ । जर्जर बाटोमा झण्डै ढुंगा बनिसकेका खस्रा पाइताला टेक्दै, दूषित वायुमण्डलमा आशु झार्दै दृष्टि गर्ने आँखाबाट यात्रा अघि बढ्छ, रगत र पसिनाले यात्रा अघि बढ्छ । अभाव र आवश्यकता पूरा गर्न पहिला पसिनाले धर्ती भिजाउने शक्तिले यात्रा भर्छ ।
कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा साहसको रापले यात्रा अघि बढ्छ । चाँदीका थालमा सुनको चम्चाले खानेहरु यात्रामा अघि बढ्दैनन् । यात्राले उत्पादन गरेका खोज, विचार र उपलब्धिको भोग गर्नु उनीहरूको चाख र चर्या हो । उनीह जीवनको स्वाद नै भुलिरहेका हुन्छन् । संघर्षका यात्रीहरू उपलब्धिको भोग गर्दैनन्, वितरण गर्दछन् । त्यसैमा यात्रा खुशी हुन्छ । दुःखमा पनि खुसी हुन्छ ।
सच्चा यात्रीहरू जीवन संघर्षमै रमाएका हुन्छन् । असल सोच, असल कर्म र असल व्यवहारबाट समाजको विवेकशील विनिर्माण गर्नु उनीहरूको कर्म हो । उनीहरू कसैका प्रतियोगी बन्दैनन् । अमिला मनहरूको औपचारिक शुभशब्दहरूमा ध्यान दिँदैनन् । कति मनहरू प्रतिष्ठाका इष्र्यामा परिश्रमीको प्राप्तिलाई इग्नोर गर्न पुग्छन् । जसको जति छ, त्यही देखिने हो, जति कर्म गर्छ, त्यति व्यवहारमा आउने हो भन्ने चेतले नै कर्म सिद्धी गर्छ । पौरखी परिश्रमलाई प्रोत्साहन गरेर नै सिर्जनाको यात्रा अघि बढ्ने हो । त्यसैले फराकिलो मन, उदात्त भावना र सिर्जनाको कर्म यात्राका प्रस्थान बिन्दू हुन् । परिश्रमी यात्रा न जीवनमा प्रतिष्ठा माग्छ, न मृत्युपछिको प्रशंसा । सुख होइन, सिद्धि खोज्छ । फगत कर्म, समपर्ण र संघर्ष उसको यात्रा हुन्छ । जति नै जर्जर र संघर्षपूर्ण भएपनि अन्तिम बिन्दूसम्म यात्रा अविराम हुन्छ । यात्रा सकिएको उसलाई पत्तो हुँदैन ।
'शी विचारधारा मात्रै होइन चीनबाट आर्थिक सहयोग लिँदा पनि सचेत बनौं'
परराष्ट्र नीति : अर्को असफलताको समीप नेपाल
झ्याउँकिरीले डाकेको दशैंं !
दशैंमा आशीर्वादको खात र त्यसको धरातल !
राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक प्रवृत्ति र समाजवाद बीचको दूरी
शीले दुई शताब्दीको कुरा गरे, तीनकुनेको पार्क दुई महिना टिक्ला ?
५ हजार घुस लिने असईविरुद्ध अख्तियारले गर्यो आरोपपत्र दायर काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी विषयमा मिलापत्र गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रु पाँच हजार घुस लिएको आरोपमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग थलीमा कार्यरत प्रहरी ना...
हिन्दू धर्ममा गाईको महत्त्व किन यति धेरै ?
काश्मीरमा भेटिए डुप्लिकेट अक्षयकुमार
धेरैबेर कम्प्युटरमा काम गर्दा आँखा चिलाउँछ र पोल्छ ? यो उपाय अपनाउनुस्